कसले बनायो टहरा बिद्रोही ने.क.पा.ले कब्जा गरेको जग्गामा ? (हेर्नुस भिडियो) – JanaSanchar.com
कसले बनायो टहरा बिद्रोही ने.क.पा.ले कब्जा गरेको जग्गामा ? (हेर्नुस भिडियो)
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ पुष २२, मंगलवार) ०५:२८
प्रतिवन्धित विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा गठित कास्की जिल्ला जनसरकारले कब्जा गरेको भनिएको पोखराको न्युरोडमा रहेको अरबौं मुल्य पर्ने जग्गामा अस्थायी टहराहरु निर्माण शुरु गरिएको छ । अहिले त्यहाा फलामको ट्रष्ट राखेर जस्ता पाताको एउटा अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको छ ।
लामो समयदेखि विवादित पोखरा महानगरपासलका वडा नं. ९ न्युरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको अगाडि वल्र्ड टचको दायााबायाा रहेको त्यस जग्गा ९ रोपनी ६ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
हाल सो जग्गा खोप्लांगे साहु भनेर परिचिति स्वर्गीय विष्ण्ुप्रसाद श्रेष्ठको नाममा रहेको छ । तर त्यो जग्गा जालसाझीपूर्ण तरीकाले नामसारी गरि लिएको भन्दै कृष्ण थापाले दशवर्षे जनयुद्धकालदेखि अहिले पनि प्रतिवन्धित विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा गठित कास्की जिल्ला जनसरकारमा उजुरी दिएका छन् । अद्यपि उक्त जग्गा खोप्लागें साहु भनिने विष्णुप्रसाद श्रेष्ठकै भएको ठहर सर्बोच्च अदालतले समेत ठहर गरेको छ ।
थापाको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै प्रतिवन्धित कास्की जिल्ला जनसरकारले गतवर्ष मंसीरको अन्तिम साता त्यस जग्गामा डोजर लगाएर जग्गा सम्याउदै जग्गा कब्जामा लिएको घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला प्रतिवन्धित ने.क.पा. कास्कीका सेक्रेटरी विवेक भण्डारी -आक्रोश)ले त्यो जग्गा आफ्नो पार्टीले कब्जामा लिएको र खरीदबिक्री र भोगचलनमा समेत रोक लगाएको घोषणा गरेका थिए । तर अहिले आएर अचानक त्यस जग्गामा अस्थायी टहराहरु निर्माण गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
त्यस जग्गामा अस्थायी टहरा कसले किन बनायो भन्ने बारेमा खोजीको विषय बनेको छ । तर प्रतिविन्धित विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.को नाममा केही टाठाबाठाहरुले आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यस जग्गामा अस्थायी टहरा निर्माण शुरु गरेको अनुमान स्थानीय बासिन्दाहरुले गरेका छन् ।
(२०७६ पुष २२, मंगलवार) ०५:२८ मा प्रकाशित